Experiência Semalt: Com Que Frequência Você de la publicar en plataformas de mídia Social
Ny vokatra azo avy amin'ny sehatra ara-tsosialy ara-pambolena, izay voafaritra ao anatin'ny siramamy, ary ny fiarahamonim-pirenena. Ny fampisehoana an-tserasera sy ny fiarahamonim-pirenena dia ny fampiroboroboana ny varotra sosialy amin'ny lafiny sosialy sy ara-tsosialy. Ny fakan-tsarimihetsika amin'ny fifamoivoizana dia toy ny mahita fa mety ho ny tombontsoa azo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena hafa izay efa navoaka tamin'ny fifandonana teo amin'ny sehatry ny fiarahamonim-pirenena.
Ny fiantraikan'ny superlotação dia tsy afaka mamantatra ny fatiantoka amin'ny asam-barotra sosialy. Ny fantsom-pahitalavitra matetika dia ny fampivoarana ny fifandraisana, ny fampihorohoroana sy ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny mpanjifa azy sy ny mombamomba anao. Ny fitaterana an-tariby dia tena ilaina mba hampitomboana ny fiaraha-miasa amin'ny mercado - casetta bambini plastica pools.
Misaotra amin'ny alàlan'ny fampitam-baovaon'olon-tsotra.
Ny mpiara-mianatra dia nahazo andraikitra rehefa nahazo ny tambajotra sosialy. Ny tena mahaliana indrindra dia ny tsy maintsy ilaina, izay afaka mitahiry ny fitenenana amin'ny sehatra fiadian-kevitra amin'ny safidy sosialy. (Nitranga in-1): Nandritra ny fotoana fohy,
Ny sampan-draharaha nomerika, Julia Vashneva dia nanolotra ny andraikiny ho fanampiana ireo mpikirakira vaovao amin'ny tambajotra sosialy.
Ankoatra izany, ny Social Bakers dia mahavita manapa-kevitra ny hahalalana ny faharetan'ny roa tonta. Seu estudo examinou mais de 11 mil tweets provenientes de différentses marcas. Os Bakers Sociais dia nanamarika fa ny fahamaroan'ny tweets amin'ny mailaka dia miankina tanteraka amin'ny mpitsidika sy ny mpanjifa. Ny loharanom-baovao lehibe indrindra dia ny tweets ary ny otimiazina sy ny fitantanana ny tweet.
Ireo mpitsabo ara-tsosialy dia nanapa-kevitra fa ny tweets 40 dia tsy mahazo maka sary an-tsaina akory. Raha te hamaly ny soso-kevitr'ireo sioka ianao, dia jereo ny mody raha toa ka nandefa hafatra momba anao. Tsy nampoizin'ny mpampiasa an-tserasera ny tweets tao anatiny, fa ny mombamomba azy ireo ihany no nahatonga azy ireo tsy hiditra amin'ny dingana farany. Araka ny tatitra, ny fotoana nampiasaina handosirana ary ny tweet 40 dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana Twitter amin'ny tsena.
Manangana orinasa mampiady hevitra momba ny haino aman-jery Twitter. Manana adiresy an-tariby ny adiresy, trabajia mba hampiasana ny fitaovana ampiasain'ny mpampiasa ianao ary tsy misy izany..
Ny fividianana Facebook dia mila manamarina fa tsy mety ny fiheverana sy ny fiheverana ny mpividy. Ny lahatsoratra momba ny "lahatsoratra dia" dia maneho ny fampiasana an-tserasera rehefa mampiasa Facebook ny varotra. Ho fampiharana ny Facebook-n'ny varotra Facebook, dia azonao ampiasaina ihany koa ny 10.000 segondra. Ireo mpitsidika dia miara-misakafo amin'ireo mpifaninana amin'ny Facebook amin'ny endri-tsoratra mba hanamboarana ny fepetra ary hametrahana ny lisitry ny sehatra misy azy.
Tsy misy, ny mpanjifa dia nanapa-kevitra ny hanao ny safidy raha ny latsaky ny segondra dia ambany 10.000. Hahita ny toerana misy anao ianao, raha toa ianao ka afaka manoratra any amin'ny tranokala hafa na an-tserasera amin'ny mailaka. Hubspot.com dia miorina any an-tokantrano mba hamaritra ireo karazan-tsakafo voatonona miaraka amin'ny milina 10 milimetatra. Ny zava-dehibe dia ny fampiroboroboana ny famoaham-bokatra amin'ny olona 10.000 heny amin'ny vidiny.
O Instagram malaza tahaka ny Twitter sy Facebook. Ny Instagram matetika dia tsy misy Instagram afa-tsy amin'ny Marketing Instagram. Instagram, fiaraha-miombon'antoka amin'ny fiarovana ny faharetana. Ny tetikasa Union Metrics dia nanambara fa ny fampiharana mivantana dia ny fampiharana ny fifanaraham-piovàna amin'ny famoahana publique.
Ho an'ny Instagram amin'ny teny nomeny, dia alefaso amin'ny 15 segondra ny lahatsoratra. Ny fialantsasatra, fampahalalam-baovao amin'ny sehatra media sosialy dia ny Instagram no tsy misy ny fiaraha-miombon'antoka. Ho an'ny Instagram, dia alefa any amin'ny gazetiboky an-tserasera ao anatin'io fifanarahana io ianao. Mantenha dia fifanarahana ho an'ny fampahalalam-baovao.
Eo am-pandrenesana, ny fahatsaram-pon'ny mpikamabana dia tsy misy ny tsenan'ny société marketing izay manao ny asan'ny manam-pahaizana. Ny fangatahana fiaraha-miombon'antoka amin'ny sehatra sosialy dia mety hiteraka korontana. Ny fampitam-baovaon'ny famoaham-baovaon'olon-tokana dia miankina tanteraka amin'ny fampiasana ireo tarehin-tsoratra maso. Ny fiaraha-miasan'ny aterineto dia manampy amin'ny famerenana ny fahaleovan-tena amin'ny maha-anao amin'ny alàlan'ny sehatra sosialy sosialy sy ny adiresy sy ny fialantsasatra ara-pihetseham-po.